Waqooyiga Kuuriya oo sameysay tijaabadii ugu weyneyd oo Niyukliyeer ah - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Waqooyiga Kuuriya oo sameysay tijaabadii ugu weyneyd oo Niyukliyeer ah - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waqooyiga Kuuriya oo sameysay tijaabadii ugu weyneyd oo Niyukliyeer ah
Waqooyiga Kuuriya ayaa shaacisay inay sameysay tijaabadii ugu weyneyd ee Hubka Niyukliyeerka ah, taasoo lagu guuleystay.
Tijaabada oo ahayd tii shanaad ee dalkaasi qaado ayaa warbaahinta dowladda ee Waqooyiga Kuuriya ay sheegtay kadib markii la dareemay dhul gariir goobta lagu sameeyo tijaabooyinka niyukliyeerka ee Waqooyiga bari ee dalkaasi ku taalla.
Dalka jaarka la ah ee Koonfurta Kuuriya ayaa rumeysan in tijaabadan ay ahayd tii ugu weyneyd ayna tahay xaalad halis ah in Waqooyiga Kuuriya ay ku horumartay hubka Niyukliyeerka.
Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya haweeneyda Park Geun-hye ayaa ugu yeertay tijaabadaasi inay tahay mid baaba’a gudaha ah keeneysa, waxayna eedeyn ba’an u jeediyay dowladda dalka Waqooyiga Kuuriya.
Mareykanka ayaa isna ka digay tallaabo kale oo laga qaado dowladda Waqooyiga Kuuriya. Halka Shiinaha uu ku gaabsaday inuu taageersan joojinta tijaabooyinka hubka niyukliyeerka ah oo xaaladda uga sii dari kara.
Previous articleWHO WANTS TO BE PRESIDENT OF SOMALIA?
Next articleAqalka Sare oo la soo jeediyay in la laalo & Gaas oo ku hanjabay inuu ka baxayo Shirka Madasha